Hay’addaha Xuquuqul Insaanka Oo Ugu Baaqay Eritrea Inay Sii Deyso Maxaabiista Siyaasadda U Xidhan | Berberatoday.com
Hay’addaha Xuquuqul Insaanka Oo Ugu Baaqay Eritrea Inay Sii Deyso Maxaabiista Siyaasadda U Xidhan
October 4, 2018 - Written by Berbera Today
Asmara(Berberatoday.com)-Xidhitaankii dhawaan loo geystay wasiirki hore ee Maaliyadda Eritrea ayaa ah calaamad muujineysa in wali ay sii socdaan xeeladaha lagu caburinayo siyaasiyiinta waddanka Eritrea, inkasta oo isbeddelo diplomaasiyadeed ay ka dhaceen dalkaasi.
Hay’adda Xuquuql Insaanka ee Human Rights Watch ayaa sii deysay muuqaal ay kasoo muuqdeen maxaabiista u xidhan siyaasadda ee Eritrea oo ay ka mid yihiin saraakiil sar sare oo dowladda Eritrea xilal ka soo qabtay iyo warfidiyeeno, kuwaasi oo xabsiga la dhigay sanakdii 2001, ka dib markii ay dhaliileen dowladda madaxweyne Afwerki.
“Waxaa jiray rajo ah in isbeddel uu ku imaan karay maxaabiista badan ee ugu xidhan Eritrea arrimaha siyaasadda, ka dib markii Itoobiya iyo Eritrea ay heshiis nabadeed gaadheen sanadkan, kaasi oo lagu soo afjarayay colaadi soo jiitameysay soddomeeyo sano,” ayey tidhi Maria Burnett, oo ah agaasimaha hay’adda Human Rights Wacth ee Bariga Afrika, Balse xidhitaanka Berhane ayaa muujinaya in waxba aysan isbeddelin”.
“In Mr Berhane Abreh loo xidho hal sabab oo keliya oo ah inuu cadeeyay waxa uu ka aaminsan yahay xaalada ka jirta dalkiisa Eritrea ayaa ah wax laga niyad jabo, taasoo sii xumaynaysa xaaladda dhanka xuquuqul insaanka ee ee ka jirta Eritrea” ayay tidhi Joan Nyanyuki, oo ah agaasimaha hay’adda Amnesty International ee Bariga Afrika, Geeska iyo Great Lakes.
“Waxaa la jooga xilligii maamulka Eritrea ay ixitiraami lahaayeen xaqa ay u leeyihiin dadka Eritrea, xoriyatul qowlka, iyo in loo ogolaado inay si cad uga hadlaan arrimaha la xidhiidha horumarinta xaaladahooda iyo mustaqbalkooda” ayey sii raacisay Joan Nyanyuki.